Techniques | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
How To Install Windows From Your Phone
How To Install Windows From A USB Stick ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို ရေးပေးပြီးပါပြီ။
အခုတစ်ခါတော့ သင့် android phone ကနေ windows ကို အင်စတောလုပ်ဖို့ နည်းကို ရေးပေးပါမယ်။
Windows installer disc ကို သင့် ဖုန်း မှာ ဆောင်သွားသလို ပါပဲ ။
အဲဒီလို ဆောင်ထားတဲ့အတွက် သင့်ဖုန်းကနေပဲ ၀င်းဒိုး အင်စတောလုပ်တာတွေ၊ ၀င်းဒိုးကို repair လုပ်တာတွေ၊system restore လုပ်တာတွေ၊၀င်းဒိုးကပြဿနာတွေကို အဖြေရှာတာတွေ၊Boot မတက်တော့တဲ့ ကွန်ပြူတာကဖိုင်တွေကို ပြန်လည်ရှာဖွေ သိမ်းဆည်း တာတွေ ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို လုပ်ဖို့ အတွက် DriveDroid ဆို တဲ့ android application ကိုသုံးပါမယ်။
သင့်ဖုန်းဟာ root လုပ်ထားဖို့ လို ပါတယ်။
နောက်ပြီး DriveDroid က android 2.2 နဲ့ သူ့ အထက်မှာ ပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
DriveDroid(Google Play Store) (or) DriveDroid 0.7.2; (My Dropbox)
ပြီးရင် + button ကိုနှိပ်ပြီး Create blank image ကိုနှိ်ပ်ပါ။Windows 7.img လို့ နာမည်ပေးပြီး 3500
MB လို့ ဆိုက်သတ်မှတ်ပေးပါ။
Partition table(MBR) ဆိုတဲ့ check box မှာ အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပေးပါ။နောက်ပြီး file system ဆိုတဲ့ dropdown arrow ကိုနှိပ်ပြီး None ရွေးပေးပါ။ပြီးရင် Create image ညာဘက်က အမှန်ခြစ်ပုံကို
DriveDroid ကနေပြုလုပ်ပြီးတဲ့ blank image ကို တစ်ချက်နှိပ်ပါ။Option မှာ (read-write) ကိုရွေးပေးပါ။
Windows က format ချဖို့ အသိပေးမှာဖြစ်ပြီး Cancel ကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးရင် active လို့ ရိုက်ပေးပါ။
ဒါဆိုရင် ntfs file system format ပြုလုပ်ပြီးတဲ့ disk တစ်ခုရရှိပါပြီ။ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ပြုလုပ်ထား
တဲ့ disk ဟာ disk G ပါ။
ဒါဆိုရင် သင့်ဖုန်း ကနေ windows အင်စတောလုပ်ဖို့ ပြုလုပ်ပြီးပါပြီ။သင်အင်စတောလုပ်ချင်တဲ့ကွန်
ပြူတာ က BIOS setting မှာ USB ကနေ boot တက်ဖို့ ရွေးပေးပြီး ၀င်းဒိုးအင်စတောလုပ်လို့ ရပါပြီ။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Friday, March 01, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ Techniques, နည်းပညာ, လမ်းညွှန်
ဒီနေ့အချိန်အနည်းငယ်ရလို့ တင်ပေးချင်တဲ့ ပို့(စ်)လေးကတော့ Android OS Device ကို Computer PC သို့ Internet Line ချိတ်ဆက်နည်းလေးပါ။
တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် Android OS Device က Internet Line ကို အခြား Device တွေအတွက် Wi-fi Hotspot လွင့်တင်တာကို ပြောတာပါ။
ဒီနည်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် Android OS Device မှာ Tethering and Portable Hotspot System လေးပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Android OS Device တွေက များနေတာကြောင့် Android OS Device အချို့တွေတော့ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ တူချင်မှတူမှာပါ။
ဒါပေမယ့် နည်းစပ်မူတွေတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။
(ဥပမာ- Huawei c8810 လိုမျိုးပါ၊) အောက်မှာ ပုံဖြင့်အဆင့်လိုက် ပြပေးထားပါတယ်။
သိသင့်တဲ့ နည်းပညာလေးမို့လို့ ဝေမျှပေးလိုက်တာပါ။ သိပြီးကြကုန်ပြီးလားတော့မသိပါ ကျနော်လည်း မအားတာနဲ့ တင်မယ်တင်မယ်နဲ့ အခုမှတင်ဖြစ်တာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မသိသေးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက်တော့ လိုကောင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် ၂။ အပေါ်မှ ပုံအတိုင်း ထဲဝင်ပါ။ ပြီးရင် Portable Wi-Fi Hotspot ကို On ပေးလိုက်ပါ။
အောက်ပုံ ကို ဆက်ကြည့်ပါ။
အဆင့် ၃။အဆင့် ၂။ အပေါ်မှ ပုံအတိုင်း ထဲဝင်ပါ။
ပြီးရင် ဒုတိယပုံအတိုင်း Device ၏ Wi-Fi Network တွေကို တော့ရပါမယ်၊ အရေးကြီးတာကတော့ Network SSID နှင့် Password လေးပါ။
ဒါဆိုရင် Password သိရအောင် Show Password ကို အမှတ်တပ်ပေးလိုက်ပါ။
Password လေးကို တစ်နေရာမှာမှတ်ထားပါ။ ပြီးရင် Save Button ကိုနိုပ်လိုက်ပေးလလိုက်ပါ။
Network SSID မှာ Device နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အမည်ကိုတွေ့ရမှာပါ။ ကျနော် ပြုပြင်လို့ ပုံမှာ Mr Thang
Ming လို့တွေ့ရတာပါ။) အောက်ပုံ ကို ဆက်ကြည့်ပါ။
အဆင့် ၄။ အပေါ်မှပုံ အတိုင်း ဖြစ်ပြီးဆိုရင်Android OS Device ကို USB ကြိုးဖြင့် Computer
PC သို့ ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ အောက်ပုံ ကို ဆက်ကြည့်ပါ။
အဆင့် ၅။ Computer PC မှာ Internet Line မရှိပါက အပေါ်မှ ပုံအတိုင်းတွေ့ရမှာပါ။ ထို Icon
လေးကို Click လိုက်ပါ။ အောက်မှ ပုံအတိုင်း တွေရမှာပါ။
အဆင့် ၇။ စောစော က ပြထားတဲ့အတိုင်း Android OS Device ထဲက Password ကို ထည့်ပေး
လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ok Button ကို နိုပ်ပေးလိုက်ပါ။
Mr thanming site မှကူးယူမျှဝေသည်။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Tuesday, February 19, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ Techniques, နည်းပညာ
မျှဝေသူ Unknown မှာ Wednesday, September 12, 2012 No comments:
From:Way to Blogging,
မျှဝေသူ Unknown မှာ Friday, December 16, 2011 No comments:
ကဏ္ဍ Techniques, ဘလော့ဂ်နည်းလမ်း
ပုံမှန်အတိုင်း format ချမရတဲ့ USB Drive ကို dos mode ဖြင့် format ချနည်း
From:ITနန်းတော် , by:လပ်ကီး ,
တစ်ခါတစ်ရံ USB drive တွေဟာ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် format ချရတတ်ပါတယ်..format ချတဲ့အခါမှာလည်းပုံမှန်အတိုင်း window မှာပါတဲ့ format ချနည်းကို သုံးကြပါတယ်...ဒါပေ့မယ် တစ်ချို့ဟာတွေကြတောအဲလိုနည်းနဲ့ချလို့ မရဘူး ဗျ...ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ USB Drive hardware ပျက်နေရင်ပဲဖစ်ဖြစ်..virus ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် format က ချမရတော့ဘူး..ဒီတော့ ဘယ်လိုချကြမတုန်း ကျွန်တော်လဲ တက်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး
မျှဝေသူ Unknown မှာ Thursday, December 08, 2011 No comments:
3D နည်းပညာ Website အညွှန်း
Posted by ဆောင်းနှင်းဖြူ ,, Send Message
3D Tutorials ဟာ 3D နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်ခန်းစာကို ဖော်ပြပေးထားတဲ့ Website တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ 3D Studio Max, Cinema 4D, Maya, Lightwave စတဲ့ Program တွေ အပါအ၀င် အခြား Program များအတွက် သင်ခန်းစာတွေကို ဒီ Website ကနေ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် Animation, Basic, Compositing, Texturing စတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့လည်း သင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သင်ခန်းစာတွေကို တခြား Site တွေနဲ့ redirect လုပ် ဖော်ပြပေးထားပြီး တစ်ဆင့်ချင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြပေးထားတာကြောင့် အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်မှာပါ။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Monday, November 14, 2011 1 comment:
အခမဲ့သင်ယူနိုင်မည့် Online Tutorial Websites များ
ဒီ site မှာတော့ Computer Programming တွေနဲ့ အခြား Course တွေဖြစ်တဲ့ Web Design နဲ့ Office Course တွေကို အခမဲ့ သင်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Programming နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ကတော့ Visual Basic.Net, Visual C#.Net, Java, Java Script, PHP တို့အပြင် Web Design အစရှိတာတွေကို အခန်းအလိုက် တစ်ခုချင်းစီ သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Microsoft Office အနေနဲ့ Microsoft Word, Excel, PowerPoint အစရှိသည်တို့ကို အခြေခံမှ စတင်၍ သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Monday, November 14, 2011 No comments:
Firefox တွင် Gmail, Facebook စသည့် Account များကို တစ်ခုထက်ပို၍ တပြိုင်တည်း ဖွင့်နည်း
Internet Browser များမှာ Gmail, Yahoo Mail, AOL Mail, Facebook စသည့်အကောင့်များကို တစ်ခုထက်ပို၍ ဖွင့်လိုပါက ပုံမှန်အားဖြင့် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အကောင့်မှ Sign Out လုပ်ပြီးမှသာ၊ နောက်အကောင့်တစ်ခုကို ထပ်မံဝင်ရောက်၍ Sign In လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အကောင့်တစ်ခု ထက်ပို၍ အသုံးပြုသူများအနေနဲ့၊ နောက်အကောင့်တစ်ခုကို အသုံးပြုလိုပါက အထက်ပါအတိုင်း Sign Out လုပ်ပြီးမှ၊ Sign In ပြန်လုပ်ပေးရပါက အချိန်ပေးရခြင်း၊ အကောင့်နှစ်ခုလုံးမှ Content များကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း အသုံးမပြုနိုင်ခြင်း၊ Built In Chatting ပါဝင်သော အကောင့်များကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း Chatting မပြုလုပ်နိုင်ခြင်း စသော အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရပါတယ်။ Firefox Internet Browser ကိုအသုံးပြု သူများအနေနဲ့ CookieSwap လို့ခေါ်တဲ့ Firefox Add-on ကိုအသုံးပြုပြီး၊ ၎င်းအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Read more »
မျှဝေသူ Unknown မှာ Sunday, October 30, 2011 No comments:
Right click တွင် Defragment ထည့်နည်း
from ကော့သောင်းသား by ကော့သောင်းသား Blogger
Start->Run->Regedit ဟုရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ၊
မျှဝေသူ Unknown မှာ Sunday, September 25, 2011 No comments:
from မိုးသိကြား by မိုးသိကြား
လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ ဈေးကြီးကြီး ပေးဝယ်ထားရတဲ့ မိမိ အသုံးအဆောင်တွေကို တန်ဖိုးထားတတ်ကြပါတယ် အဲဒီ အထဲမှာ iPhone ဆိုတာလဲ မလွဲမသွေ ပါဝင်မှာပါ။ ဟိုတစ်လောက ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သူရဲ့iPhone4 ကို ယုယုယယနဲ့Jailbreak တောင် မချရက်ဘူး အဲဒီလောက်ထိ တန်ဖိုးထားတာ၊ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ချင်တော့ အမြဲတမ်း သတိထားပါရက်နဲ့တစ်နေ့Public Area တစ်ခုမှာ မေ့ကျန်ခဲ့ပါလေရောလား... ချက်ခြင်း သတိရလို့ပြန်သွားပေမယ့် မတွေ့ တော့ဘူး ဖုန်းခေါ်တော့လဲ မကိုင်တော့ဘူး၊ ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်း မသိပဲ iPhone4 တစ်လုံး ဆုံးလေသတည်းပေါ့....
မျှဝေသူ Unknown မှာ Sunday, September 04, 2011 No comments:
Import facebook friends to Google plus
from IT Reshare Site by SB.Sangpi(စံပီး)
Google Plus နဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ အခုတလောရေပန်းစားနေတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီတော့ဘဲ တင်ရမှာပေါ့။ ဆိုတော့ ပထမဦးဆုံး Google plus account မရှိသေးဘူးဆိုရင်
Google Plus အသုံးပြုနည်း။ မှာမှာရေးထားပါတယ် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ Account ရှိပြီးသား
မျှဝေသူ Unknown မှာ Saturday, September 03, 2011 No comments:
FreeStore1.0.3 for Crack App
Jailbreak လုပ်ထားတဲ့သူ တော်တော် များများ Crack App တွေကို Installous (သို့ ) AppCake+ တို့ ကနေမှ တစ်ဆင့် Applications တွေသွင်းဖူးကြမှာပါ။ အခု FreeStore App လေးက အခြားမည်သည့် နေရာမှ သွားစရာမလိုပဲ Apple ရဲ့AppStore ထဲက နေတိုက်ရိုက် Crack App တွေကို သွင်းယူပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်....
iPad ရဲ့AppStore မှာတော့ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး...
ဗွီဒီယိုလေးကို ဦးစွာ ကြည့်လိုက်ပါဦး... Read more »
deb file တွေကို အလွယ်ဆုံး install လုပ်နည်း
iTunes Store မှာရှာဝယ်လို့မရပဲ Cydia Store မှာသာ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး Jailbreak iDevice များတွင် အသုံးပြုနိုင်သော အချို့အလွန် အသုံးဝင်တဲ့ Applications လေးတွေများစွာ ရှိပါတယ်။
အခုလိုရောင်းချတဲ့ Cydia Store က App လေးတွေကို ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက်ပြီး ပြန်လည် ဖောက်ချ cracked လုပ်ထားတဲ့ (.deb) file လေးတွေ အများအပြား ရှိပါတယ်။
ယင်း file များကို iDevice မှာ install လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေလဲ အများကြီးရှိပါတယ်။ အားလုံးထဲကမှ Wifi မလို internet connection မလိုတဲ့ အလွယ်ကူဆုံးနည်း အချို့ ကို ရွေးချယ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Read more »
မျှဝေသူ Unknown မှာ Saturday, August 13, 2011 No comments:
Downgrade iOS 4.3.5 to iOS 4.3.4, 4.3.3,4.3.2,4.3
iPhone 4,3Gs,iPad 2,iPad,iPod Touch များအတွက် iOS 4.3.5 မှသည် iOS 4.3.4,4.3.3, 4.3.2,4.3 သို့Downgrade ဆင်းနိုင်ကြပါပြီ။
iPad2(3G) အတွက် ယခုနည်းလမ်းနှင့် အဆင်ပြေလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
Downgrade ဆင်းရန် အတွက် လိုအပ်သော နှစ်သက်ရာ iOS တစ်ခုခုကို Download ဦးစွာ ရယူပါ။ Read more »
Posted by ခိုင်မြဲ on သြဂုတ် 5, 2011 at 6:21pm
သတင်းပို့မယ် View ခိုင်မြဲ's blog
မိမိကွန်ပျူတာမှာ mouse ပျက်သွားလို့ဖြစ်ဖြစ် မရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မောက်သုံးမှ ရမယ့် ကိစ္စတွေမှာ မောက်အခက်အခဲဖြစ်နေရင် အောက်ပါဆက်တင်အတိုင်း ပြောင်းပြီး ကီးဘုတ်က သက်ဆိုင်ရာခလုတ်တွေကနေ မောက်အဖြစ် သုံးလို့ ရပါတယ်။ အောက်ပါ အဆင့်လေးတွေအတိုင်း လုပ်ကြည့်ပါ။ Read more »
မျှဝေသူ Unknown မှာ Saturday, August 06, 2011 No comments:
Posted by ပြည့်စုံ
သတင်းပို့မယ် View ပြည့်စုံ's blog
အခုတင်လိုက်တဲ့ post ကကျွန်တော့်ပို့လေးမဟုတ်ပါဘူး။ myanmar nerwork မှာတွေ့တော့ဖတ်ကြည့်ပြီးကြိုက်လို့တခြားသူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Saturday, July 16, 2011 No comments:
Posted by sanay mg mg (ကိုသူရ)
View sanay mg mg (ကိုသူရ)'s blog
...ကျွန်တော်တို. Gtalk သုံးတဲ့အခါမှာတော်များများကတော့အင်တာနက်ဆိုင်မှာသုံးတာများပါတယ် ။ အခုတင်ပြတဲ့နည်းကတော့အင်တာနက်ဆိုင်မှာမိမိရဲ.Gmail Addressတွေမကျန် ခဲ့စေအောင်သုံးတဲ့နည်းလေးပါ။ဒီလိုပါ။မိမိGtalk မ၀င်ခင် မိမိရဲ.ရှေကဘယ်သူတွေ Gtalk၀င်သွားလဲ၊ သူတို.ရဲ. Gmail Addressတွေက ဘာနာမည်လဲဆိုတာသိချင်ကြပါလိမ့်မယ်။ Read more »
ဒါကတော့ Friefox version တွေ အကုန်လုံးအတွက် အခြေခံကျတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ Firefox ရဲ့ address bar ထဲမှာ about:config လို့ရိုက် Enter ခေါက်လိုက်ပါ... သတိပေးတဲ့ message ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ I'll be careful, I proxise! ဆိုတာကို click ပါ။ ပြီးရင် network.http.pipelining နဲ့ network.http.proxy.pipelining ဆိုတာတွေကို လိုက်ရှာပါ။ မတွေ့ရင် အပေါ်က Filter ထဲမှာ ရိုက်ပြီး ရှာလိုက်ရင်လည်း ရပါတယ်။ တွေ့ပြီးဆိုရင် ၄င်းတို့ပေါ်မှာ double click လုပ်ပြီး values တွေကို true လို့ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် network.http.pipelining.maxrequests ပေါ်မှာ double click လုပ်ပြီးရင် ၄င်းရဲ့ value ကို 8 လို့ပေးလိုက်ပါ။ Read more »
Web page လေးကို Word မှာ ကူးသိမ်းချင်ရင်..
Posted by ဆောင်းနှင်းဖြူ Send Message
Q- ကျနော် အင်တာနက် web page တစ်ခုကို ဖတ်ချင်၍ Word မှာ ကော်ပီ ကူးယူလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် Word ထဲမှာ ပုံစံမကျတော့ဘဲ ကျဲတဲ့စာပိုဒ်က ကျဲ၊ ဘေးရောက်နေတဲ့ စာပိုဒ်က ရောက်နဲ့ ပြင်လို့လည်းမရပါ။ ယင်းတို့ကို ကြည့်လို့ကောင်းအောင် လုပ်ချင်ပါတယ်။ နည်းလမ်းများ ဖော်ပြပေးပါခင်ဗျား။ Read more »